"Halis ka dhalan karta" muddo kororsi uu sameysto Farmaajo oo laga digay
Khatarta ayaa la tilmaamay in ay tahay mid isugu jirta heer maxali iyo mid goboleed.
ADDIS ABABA, Ethiopia – Madaxweyne Farmaajo wuu isku deyi doonaa in uu waqti ku darsi sameeyo, balse waxaa ka dhalan karta khatar, sidaas waxaa yiri Medhane Tadesse, lataliye sare oo Midowga Afrika ah.
Mudada xilheynta Farmaajo ayaa dhamaan doonta bisha Febraayo sanadka dambe 2021, waana in doorasho la qabtaa waqtigaas, sidda uu xeerinayo Dastuurka ku meel gaarka ah ee waddanku leeyahay.
Tadesse, oo u waramay wargeyska The Article, ayaa qiray in nidaamka federaalka Soomaaliya uu haatan "halis wajahayo".
Xukuumadda federaalka ayaa lagu eedeeyay in ay kasoo horjeeda nidaamka isla markaana ay burburineyso maamulada aragti ahaan ka duwan.
"Hadii qaab-dhismeedka federaalka uu halis ku jiro, lama filan karo doorashooyin nabdoon, sidda ku xusan dhaqankii hore," ayuu raaciyey.
Farmaajo wuxuu ku adkeystay in uu hirgelin doono coddeyn qof iyo cod ah, balse waxaa ku xeeran shaki badan, iyaddoo dadka naqdiyey fekerkaas ku doodayaan ammaanka iyo halista Al-Shabaab ka imaaneysa.
Guddiga doorashooyinka ayaa dalbaday 53 milyan oo Doolar si uu ugu qabto doorashooyinka qof iyo cod, oo taariikhi noqon doonta. Balse, wali ma aysan helin maalgelin ku filan.
"Dabcan, Farmaajo wuxuu isku deyi doonaa in uu muddo kororsi sameysto," ayuu tibaaay Tadesse, kaasoo aaminsan in aysan dhabaha u xaari karin doorashooyinka, taas bedelkeeda ay "khatar keeni karto".
Gabagabadii, Tadesse ayaa kusoo xiray hadalkiisa: "Waxay hurineysaa khilaafka iyo qalalasaha Soomaaliya, waxayna fursad siineysaa xoogaga hubeysan, gobolkana waxay ka abuureysaa colaad heerkeedu hooseeyo".
Soomaliya 17.01.2019. 12:47
Villa Somalia ayaa dalalka deriska ah u balan qaadey inay kala shaqeynayso dagaalka Al Shabaab.
Wasiir sharaxay dhismaha Guddiga la dagaalanka musuq-maasuqa
Soomaliya 03.12.2018. 15:25
Farmaajo oo la kulmay madaxda dalal uu hardan ka dhaxeeyo
Soomaliya 10.02.2020. 09:00
Qiimaynta Heritage ee hogaanka Farmaajo: Fashil amni iyo luminta xulufo
Soomaliya 22.03.2019. 18:29
"Dhaliisha uu Farmaajo ku leeyahay" shacabka lagu toogtay Muqdisho
Soomaliya 26.04.2020. 15:12
Weerarkii Muqdisho oo lasoo afjaray iyo Khasaraaha oo kordhay
Soomaliya 24.02.2018. 00:09
Yaa Qalbi Dhagax kusoo dhaweeyay Nairobi, Kenya?
Soomaliya 05.07.2018. 01:11
IGAD oo laga dalbaday in kulan ka yeelato xiisada Siyaasadeed ee Soomaaliya
Soomaliya 07.04.2018. 10:29
Waqtiga la shaacinayo shirkadaha soo saareya shidaalka Soomaaliya 05.08.2020. 19:40
Nin sababay geerida Soomaali oo lagu xukumay 40-sano oo xarig ah 05.08.2020. 18:20
Maxkamad Sarre oo amartay in xabsi guri la geliyo madaxweyne hore 05.08.2020. 16:05
A-Shabaab oo weerar ku qaadey saldhig ay ciidamadda Soomaaliya 05.08.2020. 15:30
Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya oo hogaan cusub yeeshay 05.08.2020. 14:30
Turkiga oo iska fogeeyay eedeyn la xiriirta Soomaaliya oo loo jeediyey 05.08.2020. 12:40